कसरी सबै चमकदार पोकीमोन पकड्न Androidsis
कसरी सबै चमकदार पोकीमोन पकड्न
इग्नासियो साला | 10/07/2021 18:00 | एन्ड्रोइड खेलहरू, pokémon जाओ
पोकीमोन गो विश्वको सबैभन्दा ठूलो मोबाइल शीर्षक हो। प्रत्येक दिन लाखौं खेलाडीहरूसँग, एक खेल जुन पोकीमोनलाई वास्तविक संसारसँग समातेर समेट्छ। चमकदार पोकेमोन पोष्टमोन GO मा अवस्थित रेसिस्ट हुन्, तर यस गाइडलाई धन्यवाद छ, हामी तपाईंलाई तपाईंको रणनीति अप्टिमेट गर्न मद्दत गर्नेछौं चमकदार पोकेमोन क्याप्चर गर्नुहोस्.
२०१é मा पोकिमोन गो लोकप्रियतामा विस्फोट भयो, जहाँ पोकेमोन ट्रेनरहरू सडकमा गए र कब्जा गरे १151१ पोकेमोन उपलब्ध। खेलाडीहरूले उनीहरूको वास्तविक-विश्व वातावरण अन्वेषण गर्नुपर्दछ पोकेमोन उच्च पर्वतहरू, गहिरो जung्गलमा, वा तिनीहरूको घर पछाडि लुकेका छन्।
1 पोकीमोन गोमा चमकदार पोकीमोन के हुन्?
2 सबै प्रकारको चमकदार पोकेमोन
2.1 पहिलो पुस्ता चमकदार पोकीमोन
2.2 पहिलो पुस्ता चमकदार पोकीमोन
2.3 पहिलो पुस्ता चमकदार पोकीमोन
2.4 पहिलो पुस्ता चमकदार पोकीमोन
2.5 पहिलो पुस्ता चमकदार पोकीमोन
2.6 पहिलो पुस्ता चमकदार पोकीमोन
3 पोकीमोन GO मा शाइनी पोकेमोन कसरी पक्रने
4 चमकदार पोकेमोन समात्न सुझावहरू
5 चमकदार पोकेमोनलाई समात्ने तरिकाहरू
पोकीमोन गोमा चमकदार पोकीमोन के हुन्?
सरल भाषामा भन्नुपर्दा, चमकदार पोकेमोन र color्ग भेरियन्टहरू हुन्। पोकीमोन प्रति एक मात्र चमकदार रंग संस्करण छ। केही भेरियन्टहरू स्पष्ट छन्, Gyarados चमकदार जस्तै, जुन नीलोको सट्टामा रातो छ। अन्यहरू अधिक सूक्ष्म छन्, चमकदार बुल्बासौर वा स्क्वर्टल, जुन समान रंग हो तर थोरै फरक शेडहरू हुन्।
सबै पोकेमोन चम्किलो भिन्नता छ, तर पोकेमोन गोमा, चमकदार पोकेमोनलाई सामुदायिक दिवस वा अन्य विशेष घटनाहरू वा नियमित शीर्षकहरू मार्फत ताला लगाइन्छ जुन यो शीर्षकले प्राप्त गर्दछ।
यदि चमकदार अनलक छैन भने, जे भए पनि पोकेमोनले तपाईले समात्नु पर्दैन, तपाईले कहिल्यै चमकदार पोकेमोन पाउनुहुने छैन। अर्कोतर्फ, एक पटक अनलक भएपछि, चमकदार पोकेमोन पोकीमोन गो मा मुख्य खेलहरू भन्दा विशेष गरी कार्यक्रमहरूमा भन्दा धेरै सामान्य हुन्छन्।
त्यसो भए पनि, तिनीहरू धेरै दुर्लभ छन्, त्यस्तै एक चमकदार पोकेमोन फेला पार्न उत्तम विकल्प देखा पर्ने पोकीमोनलाई समात्नु हो। शाइनीको लागि परीक्षण गर्न समय लिन्छ, तर एकचोटी तपाईंलाई थाहा छ कि कुन प्रजाति चमकदार हुन सक्दछ, यो धेरै सजिलो छ।
सबै प्रकारको चमकदार पोकेमोन
पहिलो पुस्ता चमकदार पोकीमोन
पोकीमोन GO मा शाइनी पोकेमोन कसरी पक्रने
चमकदार पोकेमोन पोकेमोन हुन् जसको मूल रूपहरूसँग तुलना भिन्न भिन्न रंग छ। उदाहरण को लागी, एक पोकेमोन मन पर्छ ट्रापिन्च सामान्यतया चम्किलो सुन्तला रंग हुन्छ जबकि यसको चम्किलो आकार गाढा हरियो छ।। र color बाहेक त्यहाँ यी प्राणीहरूका बारे स्वाभाविक रूपमा केहि पनि छैन।
यद्यपि, चमकदार पोकेमोन फेला पार्न धेरै दुर्लभ छन्। चमकदार फार्महरू दोस्रो पुस्ताको पोकीमोन गोल्ड र सिल्वरको साथ श्रृंखलामा परिचित भए, जब खेलाडीहरूले रोषको तालमा शाइनी गेराडोस कब्जा गर्न सके।
पोकेमोन गोमा, चमकदार पोकीमोनमा दौडिने अनौठोहरू in1० मा १ हुन्छन्। त्यहाँ खेलमा केहि पलहरू छन् जब तपाइँमा एकमा चल्ने संभावनाहरू बृद्धि हुन्छन्।
चिनो पोकेमोन क्याप्चर गर्न बाहिर जानु भन्दा पहिले थाहा पाउनु पर्ने कुरा छ त्यहाँ छ अलग तरिकाहरू छन् पोकीमोन GO मा चम्किलो प्रजाति कैद गर्न प्रबन्ध गर्नुहोस्:
यद्यपि, यदि हामी वास्तवमै हाम्रो कब्जा प्रयासमा सफल हुन चाहन्छौं भने हामीले गर्न सक्ने उत्तम कार्य हो सामुदायिक दिन को लागी प्रतीक्षा गर्नुहोस् जुन पोकीमोन गो मा महिनौं मनाईयो, हामी पछि वर्णन गरौं।
चमकदार पोकेमोन समात्न सुझावहरू
El सामुदायिक दिन यो एक घटना हो जुन पोकेमोन GO मा एक पटक हुन्छ। समुदाय दिवसको समयमा, एक विशिष्ट पोकेमोन सीमित समयको लागि तपाईंको स्प्यान दर बढाउनेछ। यस समयमा, पोकेमोन नक्शामा धेरै बार देखा पर्नेछ र त्यसैले चमकदार पोकेमोनको सामना गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
खेलाडीहरूले रिपोर्ट गरेका छन् कि ती हुन् १०-२० चमकदार पोकीमोन प्रति समुदाय दिन। शुरुवातकर्ताहरूको लागि, सामुदायिक दिवसको अवधिमा चमकदार पोकेमोनको सामना गर्ने सम्भावित सम्भावितताको संख्या पोकीमोनलाई कब्जा गर्ने प्रयासहरूको स with्ख्यासँग धेरै कुरा गर्नुपर्दछ।
अधिक चमकदार पोकेमोन पत्ता लगाउनको लागि, देखा पर्ने प्रत्येक पोकीमोन क्याप्चर गर्नुको सट्टा तपाईंले लडाईबाट भाग्नुपर्नेछ र अर्को पोकेमोनमा जानु पर्छ। यसले खेलाडीहरूलाई आर गर्न अनुमति दिन्छप्रत्येक पोकेमोन जाँच गर्नुहोस् जबसम्म तपाइँ एक चम्कि भेट्नुहुन्न। साथै, केहि लेजेन्डरी पोकेमोनसँग चम्किलो भेरियन्टहरू हुन्छन् जब उनीहरूलाई छापामा बिरूद्ध लड्न।
चमकदार तरीका यो युद्धमा पोकेमोन पराजित पछि मात्र देखा पर्नेछ। जे होस्, यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ कि सबै पोकेमोनको चम्किलो फारम हुँदैन। छापामा चम्किला पोकिनमोन स्प्यानि ofको सम्भावना बढाउन, छापासँग पूर्ण भोज हुनुपर्छ।
लगभग २० खेलाडीहरूलाई छापाउन सल्लाह दिइन्छ, जसले पोकेमोनका यी भेरियन्टहरू फेला पार्ने संभावनाहरूको संख्या बढाउँदछ। चमकदार पोकेमोनसँग पनि १००% क्याप्चर रेट छ, त्यसैले यसलाई समात्न तपाईं सुरक्षित पक्षमा हुनु आवश्यक छ।
चमकदार पोकेमोनलाई समात्ने तरिकाहरू
लाई धूप प्रयोग गर्नुहोस् पोकेमोनको स्प्यान दर बढाउनुहोस्। हाल, COVID-१ surrounding वरपरको अवस्थाको कारण, पोकेमोन GO ले इनसेन्स इन-गेमको लागत घटाएको छ ताकि खेलाडीहरूले घरमै खेल्न सजिलो होस्।
फ्र्यान्कन्से अक्सर प्रयोग गर्नुहोस् चमकदार पोकेमोनको सामना गर्ने सम्भावना बढाउनुहोस्। सामुदायिक दिनमा पक्राउ परेका चमकदार पोकेमोन अविश्वसनीय रूपमा दुर्लभ हुन्छन्, किनभने तिनीहरू सामुदायिक दिवसको बखत विकसित हुने बित्तिकै एक विशेष कदमसँग आउन सक्छन्।
लक्ष्य सधैं सामुदायिक दिवसको समयमा कम्तिमा sh चम्किला पोकिनमोन समात्नु पर्दछ। यदि एक Pokémon तीन अलग चरणहरू छन् यसको विकास चक्रमा, चमकदार पोकीमोन प्रदर्शनका लागि प्रत्येकको एक हुनु उत्तम हो।
चमकदार पोकेमोन तिनीहरू वास्तवमै राम्रो देखाउनको लागि बाहेक अरू केही देखाउँदैनन्। यद्यपि सबै चमकदार प्रकारहरू एकै ढाँचाबाट काटिदैनन्, उदाहरणको लागि राइजाजाको कालो र गाढा शाइनी आकार छ, जबकि पिकाचुको अलि फरक पहेलो रंग छ।
प्रत्येक चमकदारको आफ्नै रूप हुन्छ, जुन तिनीहरूलाई अनौंठो बनाउछ प्रत्येक पटक तिनीहरू देखा पर्दा। साथै, प्रत्येक पटक ती मध्ये एक खेलमा देखा पर्दछ, यसमा राम्रो एनिमेसन छ त्यसैले यो संग्रहमा यी दुर्लभ जीवहरू थप्न अत्यन्त सन्तोषजनक छ, विशेष गरी जब खेलाडी एक चमकदार पोकेमोनमा ठक्कर खाएर पनि ठोक्किन्छ।
त्यहाँ एक सम्पूर्ण छ पोकेमोन खेलाडी वरपर समुदाय जो चमकदार पोकेमोनको शिकारको लागि समर्पित छन्, त्यसैले यदि तपाईं अझै यी समुदायहरूको कुनै अंश हुनुहुन्न भने, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाईंले यो सुरू गर्नु पर्छ। चमकदार पोकेमोनको तपाईंको संग्रह विस्तार गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड खेलहरू » कसरी सबै चमकदार पोकीमोन पकड्न
एन्ड्रोइडका लागि २ best उत्तम कार्य खेलहरू
पाठमा अडियो ट्रान्सक्रिप्ट गर्न best उत्तम अनुप्रयोगहरू